पछिल्लो अपडेट गरिएको: डिसेम्बर १५, २०१९
Sriyog.Com मा तपाईंलाई स्वागत छ। https://www.sriyog.com वेबसाइट ("सेवा") श्रीयोग कन्सल्टिंग प्रा.लि. द्वारा संचालित गर्नु अघि सावधानीपूर्वक यी सेवा सर्तहरू ("सर्तहरू", "सेवा सर्तहरू") पढ्नुहोस् । लिमिटेड ("हामीलाई", "हामी", वा "हाम्रो") । Sriyog.Com यहाँ संशोधन पोस्ट गरेर भविष्यमा आवश्यकता अनुसार सर्तहरू परिवर्तन वा संशोधन गर्न सक्दछ । यी सर्तहरू तपाईंको स्वीकृति र मन्जूरीको आधारमा तपाईंलाई सेवाहरू प्रयोग गर्न अनुमति छ । यी सर्तहरू सबै आगन्तुकहरू, कामदारहरूर सेवाहरूमा पहुँच वा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरूमा लागू हुन्छ ।
यदि तपाईं सेवा पहुँच गर्दै हुनुहुन्छ वा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसको मतलब यो हो कि तपाईं यी सर्तहरूसँग सहमत हुनुहुन्छ । यदि तपाईं सर्तहरूको कुनै पनि भागसँग असहमत हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई सेवा तुरून्त रोक्न सल्लाह दिन्छौं ।
तपाइँले हामीलाई Sriyog.Com मा एक खाता बनाउन समयमा सही, पूर्ण र वर्तमानमा जानकारी प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि प्रदान गरिएको जानकारी भ्रामक वा गलत हो भने, यो सर्तहरूको उल्लङ्घनको रूपमा लिइनेछ, जसले हाम्रो सेवामा तपाईंको खातालाई तत्काल बन्द गर्न सक्दछ ।
प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड जस्तो तपाईको खाता विवरणहरू सुरक्षित गर्न तपाई जिम्मेदार हुनुहुन्छ । तपाई आफ्नो पासवर्ड सुरक्षित राख्न सहमत हुनुहुन्छ र कुनै तेस्रो पक्ष सग सेयर नगर्न सहमत हुनु हुन्छ । यदि तपाईंको खाता सम्झौता गरिएको छ वा कुनै सुरक्षा मुद्दाको मामिलामा छ भने तपाईंले तुरून्त हामीलाई सूचित गर्नुपर्नेछ ।
Sriyog.Com को सेवा खोज्नेहरूर सेवा प्रदायकहरूको बिच एक पुल हो र तिनीहरूको बीचमा सञ्चार सुविधा पुर्‍याउँछ । हाम्रो प्लाटफर्म स्वरोजगार बढाउने र बेरोजगारीको समस्यालाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।
प्रयोगकर्ताहरू द्वारा उपलब्ध गराईएको कुनै जानकारी वा सेवाहरूको प्रचार हामी अनुमोदन गर्दैनौं । यी प्रयोगकर्ताहरू (तपाइँ सहित) वा कुनै पनि तेस्रो पक्ष स्वतन्त्र ठेकेदार हुन् र अन्य कुनै पनि हिसाबले हामीसँग सम्बन्धित वा सम्बद्ध छैनन् । त्यस्तै रूपमा तपाईं हाम्रो वेबसाइट वा मोबाइल प्लाटफर्ममा सूचीबद्ध सेवा वा सूचना उल्लङ्घन, त्रुटि, लापरवाही, वा कुनै पनि उल्लङ्घनको लागि हामीलाई जिम्मेवार मान्न सहमत हुनुहुन्न ।
यस बाहेक हामी हाम्रो वेबसाइटमा सूचीबद्ध कुनै पनि सेवाहरूलाई कुनै बीमा वा आश्वासन प्रदान गर्दैनौं । न हामी हाम्रो प्लाटफर्म प्रयोगको लागि कुनै शुल्क लिनेछौं । यदि तपाईं हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूबाट कुनै सेवा प्रदान गर्न वा प्राप्त गर्नका लागि Sriyog.Com प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई कडा सिफारिश गर्दछौं कि तपाईं आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक सावधानीहरू र सुरक्षा उपायहरू लिनुहोस् । तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि प्रदायकहरूबाट कुनै पूर्वनिर्धारितताको मामलामा तपाईं हामीलाई जिम्मेवार मान्न सक्नुहुन्न । यदि तपाईंसँग कुनै नराम्रो अनुभव छ, कृपया हामीलाई विशेष प्रदायकको बारेमा गुनासो गर्नुहोस् र हामी तिनीहरूको खाताहरू बन्द गर्न कारबाहीमा लिनेछौं ।
अन्य वेब साइटहरुको लागी लिंक
श्रीयोग कन्सल्टिंग प्रा.लि. का कुनै नियन्त्रण छैन र सामग्री, गोपनीयता नीति, वा कुनै पनि तेस्रो-पार्टी वेब साइट वा सेवाहरूको अभ्यासको लागि कुनै जिम्मेवारी मान्दैन । तपाई थप स्वीकार गर्नुहुन्छ र सहमत हुनुहुन्छ कि श्रीयोग कन्सल्टिंग प्रा.लि. जिम्मेवार वा उत्तरदायी हुनेछैन । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि क्षति वा नोक्सानीको लागि वा त्यस्ता सामग्री, सामान वा सेवाहरू वा कुनै वेबसाइटहरू वा सेवाहरू मार्फत उपलब्ध हुने समस्यामा श्रीयोग कन्सल्टिंग प्रा.लि. जिम्मेवार हुने छैन ।
जस्तो कि त्यस्ता वेबसाइटहरूको आफ्नै सर्तहरू र शर्तहरू हामीलाई नजान सक्छ । हामी तपाईंलाई उनीहरूको शर्त र शर्तहरू तपाइँले भ्रमण गर्ने त्यस्ता पक्षहरूको गोपनीयता नीतिहरू पढ्न सिफारिस गर्दछौं ।
Sriyog.Com ले न कुनै सेवा प्रदान गर्छ वा न सूचीबद्ध सेवाहरूको कुनै पनि प्रयोगकर्ताहरूको शुल्क लिन्छ । हामी सेवाहरू प्रदान गर्न वा प्राप्त गर्नमा सामेल छैनौं वा प्रदायक र खोजीकर्ता बीच दलाल, एजेन्टवा बिचौलियाको रूपमा कार्य गर्दैनौं।
प्रदायकहरू शुल्क निर्धारण गर्न,तिनीहरूको सेवा प्रदान गर्न, भुक्तानी प्राप्त गर्नवा तिनीहरूको सेवाहरूको लागि बिल चलानीहरू सिर्जना गर्न स्वयं जिम्मेवार हुन्छन् ।
त्यस्तै सेवा खोजीकर्ता पनि शुल्कको कुराकानीको लागि आफै जिम्मेवार हुन्छन् वा कुनै भुक्तानी जारी गर्नु अघि सेवा प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने हुनेछ । हाम्रो सेवा प्रयोग गरेर दुबै प्रदायक र खोजीकर्ताहरू लेनदेन सम्बन्धी आवश्यक उपायहरू गर्न सहमत हुनेछन र कुनै पनि अन्य अफलाईन लेनदेन जस्तै व्यवहार गर्न उपयुक्त कागजातहरू प्राप्त गर्न सहमत गर्दछन् । कुनै पनि सम्झौता, वारेन्टी, सर्तहरूवा सर्तहरू प्रदायकहरू र खोजीकर्ताहरू बीचको सम्बन्ध मात्र सीमित हुनेछन् ।
प्रतिलिपि अधिकार / बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार
हाम्रो प्लाटफर्ममा भएका सबै छविहरू, लोगो, पाठ र सामग्रीहरु कि त Sriyog.Com वा तपाईंको वा अन्य प्रयोगकर्ताहरूको सामग्री हो। तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि तिनीहरू सम्बन्धित मालिकहरूको बौद्धिक सम्पत्ति हुन् र तपाईं प्रतिलिपि, परिमार्जन वा वितरण गर्नुहुन्न जुन तपाईंको स्वामित्वमा छैन । त्यस्ता सामग्रीहरू नेपाल सरकारको बौद्धिक सम्पत्ति कानून र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले सुरक्षित हुन्छन । प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघनको मामिलामा तपाइँ जिम्मेवार ठहरिनुहुनेछ ।
यदि तपाइँले हाम्रा सर्तहरू उल्लङ्घन गर्नुभयो भने, हामी तुरून्तै तपाईंको खातामा पहुँच रद्द गर्न सक्दछौं वा पहिले सूचना बिना नै तपाईंको खातामा पहुँच निलम्बन गर्न सक्दछौं। समाप्ति पछितपाईं तुरून्त हाम्रो सेवामा पहुँच गुमाउनु हुनेछर तपाईंको सेवा प्रयोग गर्ने तपाईंको अधिकार बन्द हुनेछ ।
यदि तपाईं स्वेच्छाले तपाईंको खाता समाप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ वा आफै सेवा प्रयोग गरेर बन्द गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईंको खाताको समाप्ति पछि पनि, तपाईं सम्झौताको उल्लङ्घनको लागि उत्तरदायी हुनुहुनेछ र तपाईंको विरुद्धमा कानुनी कारबाही हुनेछ ।
Sriyog.Com का शर्तहरु नेपालको कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कानूनको प्रावधानको पक्ष हो।
यदि हामी यी सर्तहरूको कुनै अधिकार वा प्रावधान लागू गर्न असफल भयौं भनेयसको मतलब यो होइन कि तपाईंलाई ती अधिकारहरूको एक छुट दिइयो । यदि हाम्रा सर्तहरूको कुनै प्रावधान नेपालको कानूनसँग विरोधाभासित छ र अदालतले अमान्य वा लागू गर्न नसक्ने हो भने, यी सर्तहरूको शेष प्रावधानहरू प्रभावमा रहनेछन । यी सर्तहरू हाम्रो बीचमा मात्र सर्तहरू हुन् जुन हाम्रो सेवाहरूको बारेमा लागू हुन्छन् र आधिकारिक हुन्छन् र यस भन्दा पहिले अन्य कुनै पनि सम्झौताको प्रतिस्थापन गर्दछ जुन हामी सेवा बीच हाम्रो बीचमा हुन सक्छ ।
Sriyog.Com कुनै पनि समयमा यी सर्तहरू संशोधन वा परिवर्तन गर्न, आफ्नो विवेकमा अधिकार सुरक्षित गर्दछ।यदि हामीले फेरी संशोधन आवश्यक पाएका छौं भने हामी तपाईंलाई कम्तिमा १५ दिनका सूचनाहरू कुनै नयाँ सर्तहरू लागू हुनुभन्दा अघि सूचित गर्नेछौं । सर्तहरूमा परिवर्तनको विषय हाम्रो विवेकमा निर्धारित गरिनेछ ।
यदि तपाइँ ती परिवर्तनहरू प्रभावकारी भए पछि हाम्रो सेवा प्रयोग गर्न जारी राख्नुभयो भने, यसको मतलब तपाइँ संशोधित सर्तहरू पालना गर्न सहमत हुनुहुन्छ । तपाईंले नयाँ सर्तहरू स्वीकार गर्नुभएन भने तपाईंले सेवा तुरून्त बन्द गर्नुपर्दछ ।